Ikhophi yama-AirPod adlulela ngaphezu kokuziphatha | Ngivela kwa-mac
Ikhophi yama-AirPod adlulela ngaphezu kokuziphatha
UPedro Rodas | | Apple, Imikhiqizo ye-Apple
Noma nini lapho i-Apple ikhipha umkhiqizo omusha, kuvela amakhophi. Lawa makhophi kwesinye isikhathi awathembeki ngangokunokwenzeka, kepha uma kwenzeka lokho Namuhla sikulethela ikhophi alinamahloni futhi linqamula kokungaziphathi kahle.
Kuyacaca ukuthi lapho i-Apple izobeka umkhiqizo omusha emakethe, itshala imali eningi ku-R + D + I ngoba umhlaba esithuthuka kuwo awuyeke ukuvela futhi amasu nobuchwepheshe kuyahambisana.
Omunye wemikhiqizo i-Apple engayekile ukuthengisa kusukela isingenisiwe ibe yi Ama-AirPod, isimanga sobunjiniyela obuncane obufike bunyathelwa yizici i-Apple ezisebenzise kuzo.
Kusobala ukuthi umqondo ofanayo ngaphandle kwamakhebuli ngaphezu komumo abanayo necala lapho babekwa khona ukuvuselelwa kubenza babe inketho enhle kakhulu ngaphandle kwenani labo lokuthi yize kungama-euro ayi-179 liphansi kakhulu kunalokho esingakuthola kweminye imikhiqizo efana ne-Samsung, i-Apple Beats noma i-Bose.
Yebo, abathandi bamakhophi bangajabula ngoba uma lokho ababekufuna kungukuthi babe nama-headphone angenawaya asesimweni sama-AirPod ngaphandle kokuba yi-AirPods, amaShayina asewenzile umsebenzi wawo futhi kahle kakhulu. Sithole enetheni ikhophi ethembekile yama-AirPods futhi uma sithi sithembekile, kuhle kakhulu ngoba okuwukuphela kwento eguqukayo uhlobo lokuqedwa kwepulasitiki olungemhlophe kangako nolucwebezela kanjalo nezinzwa ezinamahedfoni ukuthi kulokhu kushintshiwe ukucindezela izinkinobho.
Intengo, kunjalo, iphansi kakhulu ngakho abantu abaningi bazokhangwa kulo mkhiqizo. Kunamamodeli amathathu kuya ngesimo sendlebe yakho ngoba, njengoba wazi, i-Apple yethule kuphela isilinganiso ngakho ama-AirPods awafanelekile kubo bonke abantu. Izinhlobo ziyazibiza I7S, I8S kanye ne-I9S.
Njengoba ukwazi ukubona, amacala aqukethe wona ashintsha kancane kanye nokuma kwamahedfoni. Leyo eyikhophi langempela le-Apple yimodeli ye-I9S futhi ifaka isikhwama sokuthutha ngaphezu kwebhendi eliwajoyinayo ukuze singalahlekelwa ngenxa yokuwa. Intengo yayo isukela ku- Ama-euro angama-25,81 kuye kuma-31,31 euros futhi ungafunda kabanzi ngabo kusixhumanisi esilandelayo.
Indlela ephelele ye-athikili: Ngivela kwa-mac » Apple » Ikhophi yama-AirPod adlulela ngaphezu kokuziphatha
UJuan Ma Noriega Cobo kusho
jojojojo Sengivele nginezigqoko zokuzivikela ezintsha xD
Phendula uJuan Ma Noriega Cobo
Vikela iMacBook Pro Retina yakho ngalo mkhono wemvilophi wenjoloba
I-logoist 3, isiyatholakala ku-Mac App Store